28 February 2019 Volume :7 Issue :4
Kusukela kwesobunxele, yiMenenja kaMasipala uDkt Tsepang Nakin, uSolwazi Betty Mubangizi, uKhansela Matsepiso Setenane neMeya kaMasipala uMnu Momelezi Mbedla.Click here for English version
USihlalo Wezocwaningo wokuqala we-NRF-DST eKolishi Lezifundo Zomthetho Nezokuphatha, uSolwazi Betty Mubangizi, usanda kwethula isifundo esinohlonze esigcawini sokucija omasipala kwezokuphatha ngesonto lomhla we-12 kuNhlolanja ngowezi-2019.
Enye yezinhloso ezinkulu zikaSihlalo Wezocwaningo Ku-Sustainable Local (rural) Livelihoods, engaphansi kweSikole Sezokuphatha, Ubuchwepheshe Nokubusa esiseKolishi Lezifundo Zomthetho Nezokuphatha (SMIG), ukulekelela abacwaningi nezikhulu zikahulumeni ukubumba nokuqinisa indlela efanele yokuphatha kuhulumeni ukubhekana nobumpofu nokucwaswa wumphakathi.
Enye yezindlela zokwenza lokhu wukusungula amaxhama okubambisana phakathi kwezikhungo zemfundo ephakeme, izikhulu zikahulumeni nezinhlaka zomphakathi ezindaweni ezisemakhaya.
USolwazi Mubangizi ucobelele amakhansela, izikhulu zikahulumeni nabaholi bomdabu bakaMasipala waseKhaya waseMatitiele, isethulo sakhe esigxile ezinhlosweni zikasiHlalo wezoCwaningo okuhambisana nombono nomgomo kaMasipala.
Isethulo sakhe sigcizelele ubumqoka bamakhono anobuntu ezinhlelweni zokuphatha, ukwazana nobudlelwano ekuthatheni izinqumo kanye nobuholi nokufaka wonke umuntu ekufezeni umbono nomgomo kaMasipala.
Weluleke ngobumqoka bokubona izindawo ezimbalwa lapho izinto zenziwa khona ngendlela esezingeni elicokeme kuMasipala, ngenhloso yokufunda nokuthi leyo ndlela ilandelwe kweminye iminyango nezinhlaka.
Ngaphezu kwalokho, uxoxe ngesifiso se-NRF sokuthi imiphumela yocwaningo ifinyelele ebantwini abaningi nokwandisa isibalo sabafundi abenza iziqu eziphakeme. Ngemuva kokuvakashela eMatatiele phambilini, uSolwazi Mubangizi waxhumana nezikhulu zikamasipala nezinye izinhlangano ezinothando lokuthuthukisa izindawo ezisemakhaya.
Eminye imiphumela yalokhu kwaba wukwazisa ngezinhlelo zezifundo zaseNyuvesi zemfundo ephakeme. Kumanje, kunenqwaba yabafundi balezi ziqu e-UKZN ngenxa yalobo budlelwano. Kumanje babili abafundi beziqu zeMastazi nezobuDokotela emikhakheni ehlukene abalulekayo ngokocwaningo abalwenzayo.
UMnu Momelezi Mbedla, iMeya kaMasipala, ebonga uSolwazi Mubangizi, uthe bayabonga ukuthi i-UKZN ifuna ukuthuthukisa isizinda samakhono aseMatitiele.
UDkt Tsepang Nakin, iMenenja kaMasipala, uthe umagange ngomkhankaso wokuthola imali yokuxhasa abafundi abenza iziqu zemfundo ephakeme, ocwaningo lwabo lungakhulisa isizinda solwazi sikaMasipala, lube luthuthukisa izinhlelo zentuthuko.